‘क्यामरा राम्रो भएर मात्र हुँदैन टेक्निक र कला जान्नुपर्छ’ – Jhapa Photo
लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, सञ्चालक, आईटी ग्रुप
ब्याकग्राउन्ड ब्लोर गरी चहकिलो तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने मन कसलाई नहोला र ! घुमफिर गर्दा डिएसएलआर क्यामरा भिरेर सुन्दर तस्वीर खिच्दाको रमाइलो अनुभूति नै बेग्लै हुन्छ । त्यसैले आजभोलि डिएसएलआर क्यामराप्रति युवाको क्रेज बढ्दो छ । सौखिन फोटोग्राफरदेखि व्यावसायिक फोटोग्राफरको पहिलो रोजाइमा पर्छ डिएसएलआर क्यामरा । क्यामरा त किन्ने तर यसअघि यसका बारेमा कति जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ ? विगत १२ वर्षदेखि क्यानन डिएसएलआर बिक्री गर्दै आएका आईटी ग्रुपका सञ्चालक लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीसँग यस बारे हामीले कुराकानी गरेका छौँ । अधिकारी क्यामरा बिक्रेता मात्र होइनन्, राम्रो फोटोग्राफर समेत हुन् । क्यामरासँग उनको झन्डै ३० वर्षको अनुभव छ । rplexposure.smugmug.com मा उनले क्लिक गरेका तस्वीरहरु हेर्न सकिनेछ । क्यामरा तथा यसबारे उनको अनभुवबारे विवेचनाकर्मी एकराज प्रधानले गरेको कुराकानी :
क्यामरासँग कहिलेबाट जोडिनुभयो ?
फोटो खिच्ने इन्ट्रेस्ट मेरो सानैदेखिको हो । ३० वर्षअघि जब म्यानुअल तरिकाले रिल सारेर फोटो क्लिक गरिन्थ्यो, त्यसबेला मैले १५ सय खर्चेर क्यामरा लिएको थिएँ । त्यसबेला रिल लिँदा १०० आसा, २०० आसाको रिल भनिन्थ्यो । अहिले बुझ्दा आईएसओ रहेछ । त्यसबेला रिललाई नै १५० रुपैयाँ पर्थ्यो । त्यसपछि एसिका एमएफ टु असाध्यै चल्यो । फोटो स्टुडियोहरुले पनि खूब चलाए । दाम त्यस्तै २-३ हजार पर्थ्याे । अनि एसएलआर आयो । रिल नै प्रयोग हुने तर लेन्स चेन्ज गर्न मिल्ने क्यामराका रुपमा । आईटी ग्रुपले डीएसएलआर बिक्री गर्न थालेको चाहिँ १२ वर्ष जति भयो । मैले ५०० डीबाट यसको बिक्री सुरु गरेँ । १५ वर्षकै उमेरमा रिल क्यामरासँग जोडिएर आज म फाइभ डी मार्क फोर चलाउँदैछु ।
क्यामराका ग्राहक कस्ता छन् ?
क्यामरा खरिद गर्ने ग्राहक विभिन्न छन् । अलि राम्रो क्यामरा रोज्ने प्रोफेसनल र हाइ प्रोफाइलका बढी छन् । पत्रकार साथीहरु, युट्युबरहरु, फोटो स्टुडियो सञ्चालकहरु, जसलाई क्यामरा अत्यावश्यक छ, उहाँहरुले क्यामरा लिइरहनु भएको छ । फोटोमा सौखिनहरुले पनि क्यामरा रोज्नुहुन्छ । जसका लागि फोटो खिच्नु एउटा रहर मात्र हुन्छ । कति चाहिँ अरुले डिएसएलआर भिरेको देखेर रहर गर्ने पनि छन् ।
तपाईंको बुझाइमा फोटोग्राफी के हो ?
आफूले देखेको कुरालाई कलात्मक तरिकाले क्लिक गरेर अरुलाई देखाउने कला हो । त्यसकारण क्यामरा राम्रो हुँदैमा फोटोग्राफी राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसमा जान्नै पर्ने टेक्निक र कलालाई बुझ्न सक्नुपर्छ । फोटोग्राफी सम्बन्धी नियम सिक्नुपर्छ । कम्पोजिसन र एक्सपोजरलाई बुझेका फोटोग्राफरले मात्र सही ढङ्गमा डिएसएलआरलाई प्रयोग गर्न सक्छन् । सटर स्पीड, आइएसओ र एपेचर भ्यालु चलाउन जान्नेले म्यानल तरिकाले कलात्मक फोटो खिच्न सक्छन् ।
क्यामरा किन्नलाई कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
पहिलो कुरा त बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुर्पयो । आफूसँग कति बजेट छ र त्यो बजेटमा के-के लिने ? दोस्रो आफ्नो आवश्यकता । मात्रै फोटो कि भिडियो पनि ? क्यामरा म किन किन्दैछु ? यसबाट आउटपुटको अपेक्षा के हो ? यति कुरा फाइनल भएपछि हामीले आवश्यकता अनुसारको क्यामरा छनोट गर्न सक्छौँ । अहिले डिएसएलआर फोटोग्राफीका लागि १३०० डीबाट सुरु हुन्छ भने भिडियोग्राफीका लागि ८० डीबाट । क्रप सेन्सर र फुलफम क्यामराबारे हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ । प्रोफेसनलले फुल फम सेन्सर रोज्दा राम्रो ।
व्यावसायिक फोटोग्राफरका लागि क्यामरासँगै कस्ता एसेसोरिज आवश्यक हुन्छ ?
पहिला चाहिने कुरा हो ब्याग । कम्तीमा क्यामरा सुरक्षित हुनुर्पयो । त्यसपछि ट्राइपोर्ट । कम उज्यालोमा कम सटरस्पिडमा फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण फम नहल्लियोस् भनेर स्टेन्ड लगाएर ट्राइपोर्टमा खिच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि एक्सटर्नल फ्ल्यास लाइट । क्यामरामै भएको लाइटलाई मुभ गराएर आवश्यकता अनुसार लाइट दिन सकिँदैन । त्यसपछि लेन्सका बारेमा सोच्न सकिन्छ । टाढाको फोटो खिच्ने भए जुम लेन्स, वाइड लेन्स, प्रोट्रेट लेन्स रोज्न सकिन्छ । लाइटका लागि फिल्टर लिन सकिन्छ ।
मोबाइलले पनि क्यामरा अपडेट गरिरहेको छ, यसको असर डिएसएलआरमा कति छ ?
डिएसएलआरमा खासै छैन । तर कम्प्याक्ट क्यामराको भने ९८ प्रतिशत व्यापार मोबाइलले चौपट पारेको छ । ससाना क्यामराको उत्पादनै रोकिन थालिसकेको छ । डिएसएलआरमा यसको प्रभाव नपर्नुको कारण चाहिँ इमेज क्वालिटीका कारण हो । फोटो र भिडियो मात्रै खिच्नका लागि बनाइएकोले यसमा फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीका लागि धेरै फिचर छन् । जस्तो कि मोबाइलले गर्ने ब्याकग्राउन्ड ब्लोर र डिएसएलआरले गर्ने कुरामा आकाश-जमिन फरक हुन्छ । झलक्क हेर्दा राम्रो भए पनि त्यसलाई प्रिन्ट लाँदा वा ठुला स्क्रिनका लागि मोबाइलका फोटो काम नलाग्न सक्छन् ।
क्यामरा खरिद गर्न चाहनेलाई के भन्नुहुन्छ ?
आफ्नो बजेटलाई ध्यानमा राख्दै बुझेर मात्र क्यामरा खरिद गर्नुहोस् । इन्टरनेटको जमाना छ । तपाईंले क्यामराका बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाट आफूलाई कस्तो क्यामरा किन्दा ठिक हुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ । नत्र क्यामरा चलाइरहेका साथीभाइसँग सल्लाह लिन सकिन्छ । र, अर्को कुरा फोटोग्राफी एकदमै गहिराइ भएको क्षेत्र हो । यसमा राम्रो करियर पनि छ ।